Nabadeynta Sool Iyo Sanaag Bari Waa Ma Dhaafaan Iyo Muhiimad Weyn Oo Qaranku Dhayalsaday! | Somaliland Today
← CIIL BAAN LA OOYEYAA!!!! W/Q: Hamse Bashe Muhumed
Qaramada Midoobay Oo Xukuumada Soomaaliya Ku Eedaysay Inay Hubka U Gacan Galiyaan Gacmo Kale. →
Nabadeynta Sool Iyo Sanaag Bari Waa Ma Dhaafaan Iyo Muhiimad Weyn Oo Qaranku Dhayalsaday!
Anigoo ah muwaadiin jecel nabadda, wadajirka iyo is-tixgelinta qaranka iyo shacabkayga reer Somaliland … danaynayana inay meel uga soo wada jeestaan jaangooynta ayaahooda iyo mustaqabalkooda wada nooloshano; iyagoo caddalaad iyo sinaan kuwada noolaanaya. Waxaan kolkan soo dhawaynayaa baaqa nabadda ah ee Professor Cali Khalif Galaydh ku dhawaaqay, oo run ahaantii ah wax aad loogu diirsado lana taageero qof walaalka ah oo oggol heshiis iyo turxaan bixin. Waxaa sidoo kale habboon in laga hortago wixii dambe ee ah colaad iyo dhiig daadasho ah oo cadowga shisheeyahuna ku diirsado kuna tilmaamo dad aan mideysanan.
Beelaha wada dega Bariga Somaliland iyo gebi ahaanba shacabweynaha Somaliland wa dad
ul iyo dirkeeda, sina u kala maarmi Karin, kalana maqnaan Karin. Dirirtoodu waa kaa dhimay oo kugu dhimay sidaas aawadeed ma oggolin, mana taageersanin in awood ciidan wax lagu xalliyo. Arrintaas ha loo xulo gudi iyo ergoyin ka kooban golleyaasha qaranka siiba guurtida oo lagama maarman ah inay ku jiraan Xaaji Cabdi Kariim (Cabdi Waraabee) iyo Saleebaan Maxaamuud Aadan (Saleebaan-nuur). Dhinaca salaadiinta waxaa ku habboon hawshan inay galaan Boqor Buurmadow, Suldaan Xiiray iyo Suldaan Samatarka Gebiley.
“Didaam maamul lama gaadhi karo Nabad la’aaneede
Naf xuquuq helaysaan jirinayn Nabad la’aaneede
Nina ceel horwayn uma tubeen Nabad la’aaneede
Nin wallowba noloshaada dhawr Nabadda weeyeenee
Nina xoriyad kuma faani karo Nabad la’aaneede ” Cabdi Maxamed Cismaan Geelle.
Xisbiyada qaranka cida metesha waxaa looga baahanyey in aanay ka dhigan arrimaha bariga mashruuc siyaasadeed balse ay ka shaqeeyaan sidii midnimada ummadda laysugu soo dhaweyn lahaa, waayo dadkan dhimaasho iyo waxyeelo marwalba soo gaadha uma baahna oo waa dadkeennii: xidid iyo gacalba waa isu nahay. Runtii waxaynu nahay dad aan sinaba u kala maarmi Karin. Waar arrinta Sool iyo Sanaag bari yaan laga dhigin arrimo siyaasad dibedeed oo kale. Meeshu ma aha Xuduud dowlado shisheeye isku haystaan, mana ahaaa sidaa Kashmiir iyo Ukraine.
Dadka maxasta iyo wax-ma-garatada ah yaan laga iibin naxli, loona sawirin humaag colaadeed. Yaan lagu kala beerin dhito iyo aayatiin xun, oo laga dhaxlo ciqaab If iyo Aakhiro saameysa ummaddaa isku danta ah ee walaalaha ah. Baaqaas nabadda ah ee Cali Khaliif Galaydh ku yaboohay, wuxuu dadka reer Somaliland u leeyahay anfac iyo faa”iido badan. Kana dheef-roon shirarka lagu qabto had iyo jeer dalalka shisheeyee sida kuwa dowladdu la yeelato Mamuulka maqaarsaarka ah ee Xassan Shiikh Maxamuud.
Beelaha Dhulbahante ee Somaliland wa inay siyaasadda safka hore ee rukumada Somaliland iyo Xisbiyadaba ka muuqdan, oo hormoodka iyo hoggaamiyaasha ka mid noqdaan, waayo waynu is ognahay Xisbiyadi waxay u xidhan yihiin dhowr nin oo wada beelaha dhexe ah. Waar caqli iyo xaltoona maaha in jagooyinka ka muhiimka ah, baarlamaanka, guurtida iyo xisbiyada ay isku haystaan beelaha dhexe. Waar qaranka ha loo tudho sidan ummaddu kuma midoobayso, Somaliland-na kuma hanaqaadi karayso.
Madaxweyne Siilaanyo maaha ninkii arrimahan loo tilmaami lahaa hase yeeshee si ay ka noqotayba si niyadsami ah u kasban-kari-waa quluubta shacabka reer Sool. Maka ilduuf baa, ma ka dhayalsi baa mise tolow waaba ka dan la’aan? Si kastaba ha ka noqotee waxay u eegtay in xukuumadda Kulmiye aanay qaadan kaalintii laga filayey. Dulucdu waxa weeye madaxweyne Siilaanyo cidna ugama dhawa shacabka deegaankaas, oo waa dad ab-ka-ab is dhalay oo is dhex-yaallay. Dad ceesh oo milixa oo aanay ahayn in cadaawad iyo caaqib xumo dhex-timaado, waa haddii xaajada daacad laga yahay’e! Alleylahe waxay ahayd in mudanuhu tamarta, tacabka iyo kool koolinta badan ee uu geliyo deegaanada amase gobolada galbeedka Somaliland iyo nawaaxigeeda uu u huro waddanka qeybtiisa ugu weyn ee ugu muhiimsan.
Cali C/laahi Ismacil Dheeg_UK